Ukuqhutywa kwesiko le-selicon carbide igrafiki ye-brass ye-brass ye-alsinum | XTL
Ikhaya > Iimveliso > I-Silicon Carbide iMbulali
I-SIC yethu ibethelelekileyo inika ubomi obude, ukukhawuleza ukunyibilikisa, ukukhanyisela ngokukhawuleza kunye nokunganyangeki okukhethekileyo kulwazi lobundlobongela.
I-Xingtailong ngoluhlu olubanzi, olusemgangathweni olulungileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye noyilo olusetyenziswayo, iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu, i-elektroniki ishishini, ishishini le-Atomic, amanye amashishini. I-Silicon Carbide entle isebenza kakuhle, igcinwe amandla, ukukhuselwa kwendalo kwicandelo lemveliso yezamashishini
I-Silicon Carbide ineempawu ezibalaseleyo ezinjengokunganyangeki, ukuxhathisa ubushushu, ukulungisa i-odon, ukukhusela amandla okukhusela kwicandelo lemveliso yemizi-mveliso.
Ungcelele lwembethe obethelwe wasetyenziswa ngokubanzi ukuba ukhulisa amandla kunye nokunyibilika kwimimandla ye-metallgergy, iiglasi, i-petroleum yepilemu, ukhuseleko lwemichiza, ukhuseleko lwendalo, ukhuseleko lwendalo, njl.. .. ..
I-Isostatic icinezela ukubola okujikelezayo
C 30 ~ 45%, i-SIC10-40%, Al24 6 ~ 48 ~ 38%
I-cylindrical, SAGGER, sinokubonelela ngeemveliso ngokwemizobo yomthengi, iisampulu kunye nemfuno yokusebenza.
Isatifikethi se-ISO9001, iingxelo ze-QC, ezinye izatifikethi ezifunwayo zabathengi ziyafumaneka ukubonelela.
Nge-DHL / TNT / FedEx Express, impahla yomoya, ulwandle, njl.
Imfuno ethe tye enqabileyo eyi-25 ~ 40dys.
1. Ukuqhubela phambili kwe-thermal ephezulu: nciphisa ixesha lokunyibilika, longa amandla;
2. Amandla aphezulu: Ifakwe kukucinezela i-isostatic, ulwakhiwo lwangaphakathi ngaphandle kweziphene, amandla aphezulu emzimbeni;
3. Ukuchasana okungcono kwe-Oxidation: Uyilo olukhethekileyo lwe-antioxidant, kwaye usebenzise izixhobo eziphezulu zobuthathaka ukukhusela igraphite, ukumelana okuphezulu kwe-oxidation; Yi-5 ~ ama-10 amaxesha athe tye athe tye.
4. I-Anti-Sorrosion: I-Porosity esezantsi, izongezelelo ezikhethekileyo, ixhathise ngokufanelekileyo ukuvela kwe-slag kunye nezinye iinyibiba.
I-7000 yeemitha ze-Square God
Best Corundum Mullite eliyinjubaqa sagger yodongwe yetreyi Clay Iziko Factory for eliyinjubaqa weziko Company - Xngtailong